नाम एक व्यक्ति को एक अयोग्य विशेषता हो जुन हरेक सभ्यता मा निहित छ, यसको विकास को स्तर को बावजूद। यसको सहयोगको साथ, तपाई प्रायः एक व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ साथै साथ नै राष्ट्रीयता र कन्फिसेन्सी कंडीशनिंग बारे जान्न सक्नुहुन्छ। तर निस्सन्देह, यो सधैँ पूरा गर्न सकिदैन।
यो बरु फेसबुक र आमाबाबुको व्यक्तिगत प्राथमिकताको प्रभाव हो। यस लेखमा केही ल्याटिन नामहरू प्रस्तुत गरिनेछ। तिनीहरूका जडहरू पुरातनतामा फर्कन्छन्, वास्तवमा, सम्पूर्ण लाटवियन् संस्कृति जस्तै।
सबै नामहरू निम्न समूहहरूमा विभाजित गर्न सकिन्छ:
लिङ्गको आधारमा पुरुषहरू वा महिलाहरू प्रतिष्ठित छन्।
व्यक्तिको निवासको भौगोलिक क्षेत्रमा, उनीहरूले उनलाई देशी लाटवानी नाम वा अन्य विदेशी नामबाट आएका विदेशी नामलाई फोन गर्न सक्छन्;
एक विशेष धर्मको स्वामित्वले मूर्ख नाम र ईसाईलाई भिन्न पार्छ।
यद्यपि, यदि तपाईं इतिहास परिवर्तन गर्नुहुन्छ, अन्तिम दुई समूहहरू एकताबद्ध छन्, किनभने सुरुमा लाटवियन् नामहरू प्रायः ठगिन्छन्, धेरै विदेशीहरू ईसाई हुन्। यो तथ्य द्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ कि ल्याटविया को भूमि मा ईसाई धर्म केवल 12 औं शताब्दी मा मात्र आयो। त्यस पछि, थुप्रै आमाबाबुहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई पग्लुको नामहरू बोलाए र उनीहरूको छोराछोरीको लागि नामहरू पनि आविष्कार गरे।
अक्सर, पुरुषहरूको लागि लाटवियन् नाम -c (-s) को अन्तमा निर्धारण गर्न सकिन्छ। यो अन्त्य नामका सबै समूहहरूको लागि साधारण छ। यो लगिन सक्छ कि लाटवियन् केटाहरु लाई पनि उत्कृष्ट ढंगले भनिन्छ। त्यसकारण, तपाईंले पहिले नामको अर्थ बुझ्नुपर्छ। लाटवियन्हरू ईमानदार भई विश्वास गर्छन् कि नाम एक व्यक्तिको चरित्र को आकार मा एक महत्वपूर्ण भूमिका छ। यदि आमाबाबुले छोराछोरीलाई लगनशील र जोसिलो हुनुपर्ने चाहानुहुन्छ भने उनीहरूले सेन्टिस भनिन्। भक्त परिवारहरूमा केटाकेटीहरू प्राय: लेमोनिस भनिन्थ्यो, जसको अर्थ "आशिष्।"
छोराछोरीले यो वा त्यस नामलाई किन कल गर्छ?
यो लाटवियामा धेरै लोकप्रिय छ जसलाई वातावरणसँग सम्बन्धित केटा नामहरू भनिन्छ। उदाहरणको लागी, Dzintars (एम्बर) वा ड्रेविस (नेवा)।
आज तपाई नामहरू सुन्न सक्नुहुन्छ जुन पुरानो दिनमा क्रसडिडहरूमा लडेका महान जनकहरू भनिएका थिए। यी नामहरूको सबै भन्दा अधिक सामान्य Viestras र Talivalds हो।
मूलतया सबै विदेशी नाम ल्याटिन भाषामा ईसाई धर्मको विकासमा आए। स्वदेशी लाटवियन् मुख्यतः क्याथोलिकवाद र लुथेरानिज्मको प्रोफेसर गर्नुहुन्छ, यसैले ईसाई नाम जर्मनहरू, स्वीडिन्स र पोल्सबाट यी मुलुकहरूमा आए। कहिलेकाहीँ यी नामहरू रूसीहरू संग समानुपातिक हुन्छन्। उदाहरणको लागि, हिब्रू नाम जॉन लिथुआनियामा जेनिस जस्तो लाग्छ, र हामीसँग इवान छ, जसको अर्थ "ईश्वरीय अनुग्रह।" नाम पीटरिस (अर्थ "चट्टान") ल्याटियामा पुरातन ग्रीसबाट आएको थियो। पावलले लैटिन नाम पावलको एनालॉग हो। रूसी संस्करणमा, यो नाम यस्तै देखिन्छ।
लाटवियन् नाम एरिर्स को अर्थ "योद्धा" हो। यो नाम ल्याटिन स्क्यान्ड्याण्डमा प्राचीन स्कान्ड्यानेविया बाट आयो। इङ्गल्याण्डबाट एडगर्स (एक धनी योद्धा) आए, जर्मनीबाट - उल्टिस (शक्तिशाली)।
केही लाटवियन् पुरुष नामहरू केवल उच्चारणद्वारा रूसीबाट भिन्न हुन्छन्। उदाहरणका लागि, रूसीमा त्यहाँ नामहरू छोटो बनाउन नियम हो, जबकि लाटवियन् नामहरू एक मोहक रूपमा परिवर्तन भएको हो र यसबाट मूल भन्दा भन्दा बढी भयो।
धेरै स्वदेशी महिलाहरु को नाम पुरातन पुगान पौराणिक कथाहरु बाट आयो। उदाहरणका लागि, लिमको लोकप्रिय नामहरू (आनन्दको संरक्षण) र लामा (जादूगर)। लाटवियन् नामहरू, विशेष गरी महिलाहरू, प्रायः यसको मालिकको मात्र सकारात्मक प्रकाश गुणहरू वर्णन गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, मेगा-प्रेटेट्ट, इल्गा-प्यारी, मिर्ज-शानदार।
धेरै लाटवियन् नामहरू, स्त्री स्त्रीहरू र मर्द, ईसाई धर्ममा ईश्वरीय छन्। लाटाभियामा विशेष रूपमा लोकप्रिय छ अन्ना (एभर्स), क्रिस्टीना (ईसाई), मारिया (मालकिन), इन्नी (शुद्ध)।
20 औं शताब्दीको सुरुमा लिथुआनिया र स्क्यानिनेवियाको महिला नाम ल्याटिन भाषामा आए। इन्गुना, दैना, बिरुटा - यी लाटवियन् नामहरू धेरै दुर्लभ हुन्छन्। प्राय: प्राय, तर त्यहाँ त्यहाँ नामहरू छन् जुन पुरुषबाट व्युत्पन्न हुन्छन्। मूलतया, कम्युनिस्ट वा मोरङ फारम प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, मेलिटामा मेलिटिना फर्काइन्छ।
तपाइँ केटीको लागि नाम छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने लुथेरियन चर्चमा कुनै डिब्बाहरू छैनन्। प्रायः, आमाबाबुले उनीहरूको सबै कल्पना सहितका नामहरू स्वतन्त्र बनाउँछन्।
लाटवियन्को विशेषतया लोकप्रिय एनितालाई भनिन्छ। तर यो नाम धेरै हानिकारक छैन किनकि यसले देखिन सक्छ। आमाबाबुले यसको अर्थ अघि बढ्न आवश्यक छ।
लोकप्रिय नाम अनीता
यो मिठाई अनीतालाई बुलाउन सकिँदैन, किनभने उनको विशिष्ट विशेषताहरू असीमित चिन्ता, दृढता र अत्यधिक घर्षण हुन्। यस नामको गर्भमा बच्चाहरु बचपन देखि प्राधिकारीहरुलाई पहिचान गर्दैनन्। तिनीहरू आफ्ना विचारहरू र अन्तमा विचारहरू पालन गर्न चाहन्छन्, स्कूलमा तिनीहरू प्रायः शिक्षकहरूसँग तर्क गर्छन् र वयस्कहरूलाई मनपर्छ। यस्तो केटीसँग एक विशाल शक्ति, एक विश्लेषणात्मक दिमाग, र उत्कृष्ट मेमोरी छ। यसबाहेक, अन्तालाई अपरिहार्य प्रेरणा छ। केटी अत्यन्त स्वभाविक छ, तर जीवनमा उनी धेरै स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुन गाह्रो छ। उनले सधैं कसैलाई प्रतिरोध गर्न दिन्छन् जसले उसलाई समझाउन वा केही चीज गर्न सिकाउँछन्, अनीता पनि सल्लाह सुनेनन्, तथापि कहिलेकाहीं यी धेरै सुझावहरू अपरिहार्य र आवश्यक छन्। विवरणको विस्तृत अध्ययन, हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं कि यो नाम - आशिष् भन्दा बढी यो श्राप छ। तर केही कारणले, लाटवियन्ले अनीताको नामलाई आफ्नो नवजात शिशुलाई बढावा दिन्छन्।
फैशनले यसको नियम लेख्छ
आज, परम्परागत परम्परागत नामहरूको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बन्छ, जस्तै आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई बोल्छन्, मानिसहरूको परम्पराहरू होइनन्, तर फैशन। रोजगारीको जीवनमा त्यहाँ केही थोरै नामहरू थिए जुन पहिले अस्तित्वमा थिएनन्। तिनीहरू केवल अरूबाट व्युत्पन्न हुन्छन्। यो दुखाइ छ, तर केही सुन्दर लाटवानी नामहरू विलुप्तको कगारमा छन्। तर प्रायः लातवियामा तपाईं अनन्तैसियस, विक्टोरिया र एलेक्जेव्रो भेट्न सक्नुहुन्छ।
यो उल्लेखनीय छ कि लाटोनमिक ले ल्याटिन भाषा मा प्रयोग गर्दैन। केवल नाम र उपनाम। तर यदि लाटवियन्हरू रूसी-भाषा स्रोतहरूमा उल्लेखित छन् भने, त्यसपछि यो व्यक्ति पहिचानकर्तालाई अरूसँग बराबरमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रश्नको जवाफ कसरी दिने? "जीवन कस्तो छ?" मौलिक जवाफ
अभिव्यक्तिले "टाउको भन्दा माथि जानुहोस्" को अर्थलाई के गर्दछ
प्रविधी र दबाइहरु: को cystitis रोकथाम
कालानुक्रमिक क्रममा ठूलो रूसी शासक
आंतरिक मंत्रालय र कानुनी क्षेत्र यसको महत्व प्रशासनिक विनियम।
समारोह epistemological दर्शन
कसरी आफ्नै हातले लागि ईट प्रेस बनाउन
मेरी Resort होटल Kemer 5: * फोटो र समीक्षा
केटाहरू किन बिहान छ? मानिसहरू किन बिहान उठ्छन्?
मोबाइल अडान। हामी सही विकल्प बनाउन छन्।
मग DOUCHES: प्रयोगका शर्तहरु
Niacin बाल: समीक्षा र सुझावहरू